अध्यक्ष क. प्रचण्डलाइ खुल्ला पत्र
आराम छु । आरामको कामना गर्दछु । सिता कमरेडको स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु । म सेमन्त राज खनाल इटहरी सुनसरीबाट । जनयुद्धको थालनी गर्दा म जम्मा ४ वर्षको थिए । मैले महान जनयुद्धमा सहभागी जनाउने अवसर पाइन । मलाइ दुख लाग्छ । म एक सामान्य परिवारको मानिस हु । भोजपुर जिल्ला अरुण गाउँपालिका वडा नं. ४ साविक चरम्वी गा.वि.स.वडा नं. १ मा भएको हो । जनयुद्धको राप र तापबाट सृजित समाज मैले मज्जाले भोग्न पाएको छु । मलाइ मन परेको माओवादीका समान वितरण, धनि र गरीव विच ठुलो खाल्डो भर्ने कार्य, उच्च वग र निम्म वर्ग विचको खाडल आदी पुर्ने काम माओवादीको आन्दोलन र चेतनाबाट सम्भव भएको घामजतिकै छर्लङ्ग छ ।
जातिका आधारमा कोही मानिस ठुलो र सानो हुदैन भन्ने चेतना मलाइ त्यही आन्दोलनले सिकाएको हो । म व्राम्हण उपाध्याय । मेरा वा आमाले सिकाएका संस्कारहरु धेरै कुरीति रैछन । मैले त्यही कलिलो उमेरमा थाहा पाएको हो की राज्यका हरेक निकायमा सवै जातजाति, वर्ग, भूगोलबाट प्रतिनिधित्व चाहिने अनिवार्य चिजलाइ तत्कालिन राजाले जनताको अधिकारलाइ कुठाराघात गर्दै माघ १९ को कालो रात्री रेडियो नेपालवाट श्री ५ को सरकारको भत्तिभाव अझै मेरो मनस्पटलमा गुञ्जिरहन्छ । परिवर्तनका लागि माओवादी भएर समाजमा डुली छाती चौडा वनाएर वस्न पाउदा अत्यन्त हर्षित महसुस गर्दछु । यी सवै मेरा गन्थन भए । मैले महसुस गरेको माओवादी र अहिलेको माओवादी केन्द्रमा धेरै अन्तर पाउदा झस्किन पुग्छु । र तपाइलाइ भौतिक उपस्थितिमा दिनुपर्ने चिठी म खुल्ला रुपमा लेखिरहेको छु । तपाइलाइ म २०५८ सालबाट महसुस गर्न सक्दछु जतिवेला हाम्रा छिमेकी काकाले तपाइको हस्ताक्षरित माओवादीको संगठित सदस्य कार्ड मलाइ देखाउदै, डर देखाउदै देखिस हामि कसका मान्छे रहेछौँ, हेर मेरो प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेको मेरो कार्ड भनी देखाउदा तपाइ मेरो दिल अनि दिमागमा पस्नु भएको अहिले २० वर्ष पुगेछ ।
जतिवेला म १० वर्षको वालक थिए । तपाइले महान जनयुद्धको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउनु भयो । त्यो चानचुने कुरा होइन । र मेरो औकातले सोच्न सक्ने विषय पनि होइन । अहिले सम्झन्छु प्रचण्ड, वावुराम, मोहन वैद्य, आहुती, विप्लव, माल्दाइ, साल्दाइ, सि पि कामरेड सवैप्रति आजपनि उत्तिकै सम्मान रहन्छ । जनयुद्धमा होमिएका लाखौँलाख युवाहरु आज कस्तो अवस्थामा होलान भन्ने डर मनमा पस्छ र भित्रभित्र चिसो भएर सहिदहरुको सम्झना र सम्मान हृदयमा उकुसमुकुस भएर मडारिन्छ । महिलाले चलाएको वन्दुकको गोली वांगो जान्छ भन्ने समाजमा हुर्किएको म आज नि चलीहरुको अवस्था के होला जो सहिद हुनवाट वचेका थिए । त्यो समाज जहाँ आमुल परिवर्तन र सत्ता कब्जा गर्ने रणनीतिक कासन पाएका ती कलिला र पानि पधेँरा धाउने पाउहरु के गर्दै होलान ? समाज त्यही हो पुरै सत्ता कब्जा गर्न भनी सम्पूर्ण सुख सुविधा, घर व्यवहार त्याग गरेर महान जनयुद्धमा होमिएका महिला दिदीवहिनीहरु फेरी रित्तो हात त्यही समाजमा कति वाणरुपी वचन सहेर वसेका होलान तपाइलाइ राम्ररी थाहा छ ।
आज जनयुद्ध लडेर एउटै ओछयानमा सुतेका एउटै थालमा खाना खाएका ७५ प्रतिसत साथीहरु कहाँ हुनुहुन्छ ? जनयुद्ध जस्तो महान तथा पवित्र चिजलाइ आज किन त्यही जनयुद्ध लडेका लडाकुहरु फोहोरलाइ भन्दा वढी घृणा गर्दछन ? सोच्नुभएको छ ? जनयुद्धले कसलाइ वढी फाइदा पुयायो मः मः गर्नुहोला । २०६३ सालमा मैले एसएलसी दिएँ । त्यहीवेला माओवादीले शान्ति प्रकियामा आएर २०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलन सफल वनाउने क्रममा नै थियो । त्यसको हिमायती माओवादी हुन पाउदा गर्वले छाती चौडा हुन्छ । त्यसवखत माओवादीप्रतिको आकर्षण लोभलाग्दो थियो । त्यही लोभलाग्दो आकर्षणले गर्दा २०६४ सालको संविधानसभाको निर्वाचनमा माओवादी देशकै सवैभन्दा ठुलो पाटि भयो । अहिले सम्झिदा मात्र पनि आनन्द महसुस हुन्छ । भित्रभित्र कुतकुति लागेजस्तो हुन्छ । त्यहीँवाट देश र जनताको सेवा नै पहिलो मेरो कर्तव्य ठानेर पाटिमा विना स्वार्थ लागेको म एउटा युवा आजसम्म आइपुगेको आरोह अवरोहवाट धेरै कुरा वुझ्न सक्छु । संविधानसभावाट नेपाली जनताको भाग्य र भरोसा कोर्ने सपना वाल वाल वचेको स्मरण गर्न चाहन्छु । त्यसमा तपाइको भूमिका प्रशंसायोग्य छ र रहन्छ । इतिहासले तपाइमाथि निर्मम समीक्षा गर्ला ।
तर तपाइलाइ देश र जनताको चिन्ता आफ्नो सन्तान भन्दा माथि भएको पुष्टि भइसकेको छ । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा पहिलो पाटि हुनुको नाताले तपाइले यो देशको प्रधानमन्त्रि वन्न पाउने स्वभाविक प्रक्रियावाट प्रधानमन्त्री हुनुभयो तर विडम्वना भन्नुपर्छ परिवर्तन नचाहने र तपाइलाइ वाध्यतावस स्वीकार गरेका केही सहयात्री अलग पाटिका अध्यक्षहरुले तपाइ शान्तिमा रहेको हेर्न नसकेर अनेक गरेर सरकारवाट राजिनामा दिन वाध्य पार्ने काम भयो र तपाइले सत्ता मेरा लागि सामान्य चिज हो भन्ने उदाहरण वन्नका लागि राजिनामा दिनुभयो । त्यो सामान्य मानिसवाट सम्भव थिएन । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा माओवादी तेस्रो पाटि वन्यो । त्यो किन भयो तपाइलाइ राम्ररी थाहा छ । स्मरण मात्र गराउन चाहेँ । तपाइको सत्ता काल खण्ड राम्रै छ । प्राय प्रतिपक्ष भूमिकामा वस्न नरुचाउने तपाइको १० वर्षे कालखण्डमा राम्रै देखिन्छ । २०७४ सालको निर्वाचनमा एमालेसँग चुनावी गठन त गर्नुभयो तर स्थानीय चुनावमा गर्न नसकेको प्रति तपाइलाइ अपसोच रहन्छ जस्तो मलाइ लागेको छ । हुनत कम्युनिष्टहरुको एकता सुन्दा आनन्द आउथ्यो । त्यो त कम्युनिष्टहरुको एकता भन्दा पनि तपाइ जहिले शान्तिमा रहने कुरा हो भन्दा अत्युक्ती नहोला ।
तपाइका शक्ति जनसेना थिए त्यसको समाप्तीपश्चात सहकर्मी मित्रहरुले तपाइलाइ पालैपालो छोड्दै जाँदा कमजोर भएको महसुस गर्नु स्वभाविक थियो । कम्युनिष्टहरुको एकता केवल एउटा हतास मनस्थितिको उपज थियो र त्यो दुवै जनाको स्वार्थ पुर्तिको एउटा खुड्किलो थियो । त्यो स्पष्ट छ । त्यो भोगाइ मलाइभन्दा तपाइलाइ अवगत छ । ने.क.पा.डवल जे हुनुपर्ने थियो त्यही भयो । आरोप ओलीलाइ लगाएपनि त्यसको स्वार्थ कांग्रेसले वुझेको छ । कम्युनिष्ट नफुटाए कांग्रेसलाइ आउँदो चुनावमा समस्या देखिने स्पष्ट थियो । दुइ पाइलट भएर जेटलाइ चकनाचुर वनाएर घाटा तपाइ हामिलाइ भयो । तपाइका विस्वासिला पात्र फिर्ति नहुँदा हामि झन कमजोर बन्दै गयाँै र अन्ततः न कुरा मिल्ने न सिद्धान्त मिल्ने केवल स्वार्थ मात्र मिल्ने कांग्रेससँग सरकारमा सयर गर्ने तपाइको निर्णय ओलीको वहिगर्मनसँग भन्दा आफ्नो शक्ति कमजोर नहोस भन्नका खातिर गरिएको भूतले खाजा खाने वेला गरिएको निर्णय भन्दा अन्यथा नहोला ।
तपाइको हतास मानसिकताले कहिले पाटि विघटन गर्ने धम्कि त कहिले निरासाजनक अभिव्यक्तिले प्रष्ट्याउछ । हजारौँ युवाहरु यस पाटिमा भविष्य देखेर लामवद्ध भएका युवाहरुको भविष्य अन्योल र डामाडोल पार्न कसैलाइ छुट छैन । यसैलाइ हामिले भविष्य देखेर तपाइलाइ विस्वास गर्दै लामवद्ध भएको हेर्ने हाम्रो आशा र भरोसाको केन्द्र माओवादी केन्द्रलाइ वचाएर अगाडि नवढ्दा सम्म तपाइ हाम्रो भविष्य अन्धकार छ । कम्युनिष्ट एकता सुन्दा जति मजा आउछ । वास्तविकता त्यति नै तितो छ । के का लागि कम्युनिष्ट एकता गर्नुभएको थियो । त्यसको गम्भिर समीक्षा पाटिभित्र हुनुपर्छ । एमालेसँग पाटि एकता हुदा तपाइले माओवादलाइ छोडेर अव यता फर्कनु नपरोस भन्ने भाव जनता र कार्यकर्तालाइ सम्प्रेषण गर्नुभएकै थियो । हतासमा, आवेगमा गरिएको एकता एकता नभइ ए कता ? हुन पुग्यो । तपाइका आसेपासे र भरौटे र परिवारवादको जुन आरोप खेप्नुभएको छ त्यो वास्तविक र साँचो हो भन्न अव कुनै आइतवार कुर्नु पर्दैन ।
तपाइसँग वास्तविक सूचना नपुग्नु वा तपाइलाइ देवत्वकरण गरेर गरिएको भक्तिभाववाट सचेत रहनुहोला । आलोचनात्मक सुझावलाइ अन्यथा लिएर झन चिज विग्रीएर जान्छ । अन्त्यमा अझैसम्म हामिले नेतृत्वको विकल्प खोजेका छैनौ । भरोसा छ अखिल क्रान्तिकारीको सम्मेलन, वाइसिएलको सम्मेलन आदी हेर्दै गर्दा तपाइमा शक्ति केन्द्रमा राखेर गरिएका यस्ता खालका क्रियाकलापले पाटि मजवुत हुनुको सट्टा कमजोर भइरहेको महसुस गर्न सकिन्छ । निर्वाचनवाट स्वः स्फुर्त नेतृत्व छान्ने अधिकारवाट वञ्चित गरिन्छ भन्ने यो भन्दा लोकतन्त्रको भद्दा मजाक अरु केही हुदैन । अव पाटिलाइ सुधार्ने नै हो भने तपाइले स्वीकारेको कुरा तपाइ हामि विग्रीएर हो भन्ने महसुस मात्र गरेर हुदैन । सुध्रिएर देश र जनताको आशा र भरोसाको केन्द्र वन्न हामिलाइ कसले रोकेको छ ? मलाइ थाहा छ यस पत्रको प्रतिउत्तर आउदैन । किनकी यो प्रेमपत्र होइन । अन्त्यमा वीर सहिदहरुको सम्झना गर्दै लालसलाम ।
तपाइको उही संगठित सदस्य